PD Avengers - ပါကင်ဆန်ရောဂါကိုအဆုံးသတ်ရန် United
"pdavengers.eu" သည်ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့် G | ဘာသာပြန်လာသည်၊ တိကျမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအားနည်းချက်များအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။
PD Avengers များ
Dopamine မှုတ်သွင်းထားသော Spark
World Parkinson's Day အမှတ်တံဆိပ်ကိုလှုံ့ဆော်ကူညီပါ
PD အမျိုးသမီး Avengers ချန်ပီယံအမျိုးသမီးများနှင့် PD
PD Avengers များကြီးထွားလာသည်။
PD Avengers TAKEOVER ဖြစ်သည်
လုပ်ဆောင်ချက်သတိပေးချက် ဖေဖော်ဝါရီ 2021
Lead နှင့် PD ကို ထိတွေ့မှု
Paraquat စာတမ်းများ - အမေရိကန်တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အပ်ဒိတ်များ - US သိပိုင်ခွင့်
Ray Dorsey နှင့်ပါကင်ဆန်နှင့်ပိုးသတ်ဆေးများ
PCB (Polychlorinated Biphenyls) နှင့် PD
ပါကင်ဆန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများမြင့်တက်နေသည်။ တစ် ဦး ကဘုံဓာတုအပြစ်တင်ဖို့ဖြစ်နိုင်သည်
အဆိုပါ Paraquat စာတမ်းများ
Titanium dioxide ကိုဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများအဖြစ်ဆက်လက်ခွင့်ပြုထားဆဲဖြစ်သည်
Neurons အသစ်များဖန်တီးခြင်း: ပါကင်ဆန်ရောဂါပြန်ဖြစ်နိုင်ချေ
သကြား- ခါးသီးသော အမှန်တရား
🇨🇦 PD Avengers - မူလအစ
🇩🇪 PD Avengers ဂျာမနီ
🇪🇸 Con P de ပါကင်ဆန်
🇫🇷 Comprendre ပါကင်ဆန်
🇫🇷 Rendez သင်ပြင်သစ်ပါကင်ပါ
🇺🇸 ပါကင်ဆန်သုတေသနအတွက် Michael J. Fox ဖောင်ဒေးရှင်း
YouTube တွင် စာတန်းထိုးများဖွင့်နည်း
PD ပါသောအမျိုးသမီးများ: လိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်းခြင်းနှင့်အောင်မြင်မှုများကိုလိုက်ရှာခြင်း
🇪🇸 Campaña "ငါ့ဖိနပ်ထဲမှာ con p"
🇪🇸Campaña mujer y párkinson
ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် 'ကျွန်မဖိနပ်ထဲမှာ' လှုပ်ရှားမှု
GDNF - ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအငြင်းပွားဖွယ်ရာ
ဂျာမနီ- Neuro-Initiative 4.0
ဧပြီ ၁၁ World Parkinson's Day လှုပ်ရှားမှုအားလှုံ့ဆော်ကူညီပါ
ပါကင်ဆန်ရောဂါဂျာနယ် – JPD သတင်းလွှာ – အတွဲ ၁၁၊ စာစောင် ၄
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ/သြဂုတ်လတွင် Larry Gifford ထံမှစာ
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ တွင်လယ်ရီထံမှစာ
ဂျိမ်းစ်မဟုတ်သည့်နေရာ - WPC ဘလော့ဂ်
PD Avengers ဆိုတာဘာလဲ။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် PD Avenger တစ်ယောက်ဖြစ်သနည်း။
Impressum & ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ
ငါတို့ တနိုင်ငံလုံး လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ကြုံရတယ်။ "AktivZeit" အောင်မြင်စွာ စတင်ပြီးနောက် ဥရောပတစ်ဝှမ်း ကမ်ပိန်းတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။
11 ခုနှစ် ဧပြီလ 2022 ရက်နေ့ တွင်ကျရောက်သော World Parkinson's Day တွင် ဂျာမဏီ၊ သြစတြီးယားနှင့် ဆွစ်ဇာလန်ရှိ ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသူအရေအတွက်အတွက် မိနစ် 500,000 စုဆောင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်လတာ စိန်ခေါ်မှုကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်ပတ်ကျော်ကြာပြီးနောက် ပထမအဆင့်ပန်းတိုင်သို့ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယခုအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏စိန်ခေါ်မှုသည် ဥရောပတစ်ခွင်တွင် ကျယ်ပြန့်လာပါသည်။
တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ လူပေါင်း 1,000 ခန့် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် လက်ဝှေ့၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်၊ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် တောင်တက်ခြင်းအပါအဝင် အားကစားမျိုးစုံတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ သို့သော် ဒရမ်တီးခြင်း နှင့် ကခြင်းတို့သည် အကြိုက်ဆုံးများထဲတွင် ပါဝင်ပါသည်။
နေ့စဉ်မွမ်းမံထားသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် သင်တန်းသားများအား ပိုမိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန် မက်လုံးပေးသော်လည်း အကြီးမားဆုံးသောပန်းတိုင်များကို အတူတကွအောင်မြင်နိုင်သည်- Parkinson's အကြောင်း ပညာပေးခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းပိုမိုမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းတို့ကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
လူတိုင်းသည် ရောဂါရှိ၊မရှိ၊ တစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ ပါဝင်နိုင်သည်။ တက်ကြွသောမိနစ်တိုင်းသည် စုစုပေါင်းရလဒ်အတွက် ရေတွက်သောကြောင့် 11.06.2022 အထိ အချိန်မရွေးပါဝင်နိုင်သေးသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထအဖွဲ့များ၊ ဆေးခန်းများနှင့် ကျောင်းအတန်းများပင် ကမ်ပိန်းတွင် စိတ်အားထက်သန်စွာ ပါဝင်ကြသည်။
ပါကင်ဆန်ရောဂါကို ခံစားနေကြရသော ပွဲစီစဉ်သူ6ဦးပင်လျှင် ဤမျှကြီးကျယ်သော အောင်မြင်မှုကို မမျှော်လင့်ထားပေ- 17 ရက်အကြာတွင် စိန်ခေါ်မှုပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိပြီး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် တက်ကြွသော မိနစ် 500,000၊ www.aktivzeit.org စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါ ၎င်းသည် ပါကင်ဆန်ရှိသော လူသား 1,200,000 သန်းအတွက် တက်ကြွသော မိနစ် 1.2 ၏ ပန်းတိုင်သစ်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
Parkinson's သည် ကုသ၍မရသော အာရုံကြောဆိုင်ရာ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာ အမျိုးမျိုးရှိသည်။ Challenge သည် လေ့ကျင့်ခန်းများကို မြှင့်တင်ရန် အားလုံးထက် ရည်မှန်းထားသည်၊ အကြောင်းမှာ နေ့စဉ် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုသည် ရောဂါ၏ တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကို နှောင့်နှေးစေသော အရေးကြီးဆုံးကုထုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကတွေ့ရှိခဲ့သောပါကင်ဆန်ရောဂါသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာသောအာရုံကြောရောဂါဖြစ်သည်။ ကုသဆေးမရှိသေးပါဘူး။
PD Avengers များသည်ပါကင်ဆန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူတကွပူးပေါင်းလျက်ဤရောဂါအားမည်သို့မြင်သည်နှင့်ကုသသည်ကိုပြောင်းလဲရန်တောင်းဆိုသည်။
“ ပါကင်ဆန်ရောဂါကိုအဆုံးသတ်ခြင်း” စာအုပ်မှုတ်သွင်းထားသောကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အကုန်တွင်ပါကင်ဆန်အသိုင်းအဝိုင်းကိုယ်စားအတူတကွရပ်တည်ရန် ၂၀၂၂ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်အသံပေါင်းတစ်သန်းကိုစုစည်းလျက်ရှိသည်။
မင်း PD PD Avenger တစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာလား။
inson ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူ ၁၀ သန်းသည်ပါကင်ဆန်နှင့်အတူနေထိုင်ကြသည်
🔴လူသန်းပေါင်းများစွာသည်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးနှင့်ဖြစ်စေ၊ ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး ဦး နှင့်ဖြစ်စေနေထိုင်ကြသည်
today ယနေ့လူ ၁၅ ယောက်တွင် ၁ ယောက်သည်ပါကင်ဆန်ကိုရလိမ့်မည်။ ဒီရောဂါကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ဒေသအားလုံးနီးပါးတွင်ပါကင်ဆန်၏နှုန်းသည်တိုးနေသည်
past လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်တာကာလအတွင်းပါကင်ဆန်ရောဂါရှိသူ ဦး ရေသည် ၂ ဆတိုးလာပြီးကျွမ်းကျင်သူများက ၂၀၄၀ ခုနှစ်တွင်ထပ်မံနှစ်ဆတိုးလာမည်ဟုခန့်မှန်းကြသည်
PD Avengers သည်ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်ငွေရှာရန်မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိပရဟိတလုပ်ငန်းများနှင့်ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများလုပ်ဆောင်သောအလုပ်ကိုအစားထိုးရန်မကြိုးစားပါ။ ရိုးရှင်းစွာအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်ရောဂါကိုမည်သို့ကုသသည်နှင့်ပြောင်းလဲမှုကိုတောင်းဆိုရန်သူတို့၏စုပေါင်းအသံများကိုအတူတကွစုစည်းရန်ရှာကြသည်။
မူလစာအုပ် "မှုတ်သွင်းပါကင်ဆန်ရောဂါအဆုံးသတ်"PD Avengers ကပိုပြီးလုပ်နိုင်တယ်၊ လုပ်ရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောလူ ၁၀ သန်းသည်ဤအဆက်မပြတ်အခြေအနေကြောင့်သူတို့၏မိသားစုများ၊
PD Avengers အသင်းသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်ဘာမျှမကုန်ကျသော်လည်း၊ ရောဂါအဆုံးသတ်ခြင်းသည်များစွာသောလူများအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုပူးပေါင်းနှင့် PD Avenger ဖြစ်လာမလား? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ပါကင်ဆန်၏ပပျောက်ရေးအတွက်အော်ဟစ်အော်ရန်အတွက်လွယ်ကူသော၊ ဒီအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြချက်မှာငါ့ကိုပူးပေါင်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မူပိုင်ခွင့်© 2022 PD Avengers များ။ မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။ အဓိကအကြောင်းအရာ ကျယ်ဝန်း ThemeGrill ကဖြစ်သည်။ မှပံ့ပိုးသည်: WordPress.